Business Career Advice Education Help & Support Job Search Skills Management Personal Growth University Upgrade Yourself
အလုပျအကိုငျပွောငျးလဲခွငျး (အငျဂငျြနီယာပညာရပျမှ လူ့အကြိုးပွုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဆီသို့)
အလုပျအကိုငျလမျးကွောငျးက ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွဈနိုငျပွီး တဈသမတျတညျးက ဖွဈခဲပါတယျ။ အလုပျအကိုငျကို လူတဈယောကျရဲ့ ကိုယျပိုငျရညျမှနျးခကျြတှေ၊ အိပျမကျတှကေ ပုံဖျောပေးသလို လူတဈယောကျရဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ ပျေါပေါကျလာတဲ့အခှငျ့အလမျးတှကေလညျး ပုံဖျောပေးပါတယျ။အောကျဖျောပွပါဇာတျလမျးမှာ စီးပှားရေး၊ နိုငျငံရေးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအမွငျပွောငျးလဲမှုတှကေ ဘယျလိုမြိုး အလုပျအကိုငျလမျးကွောငျးကို ဖွဈထှနျးလာစတေယျဆိုတာကို ပွသထားပါတယျ။ တဈခါတရံမှာ ဒါက အတားအဆီးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ အခှငျ့အလမျးတှကေို ယူဆောငျလာပေးပါတယျ။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ဇာတျလမျးမှာ ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျရေးပျေါမှာ အာရုံစိုကျတဲ့ စိတျနစေိတျထားနဲ့ အကောငျးဆုံးကွိုးစားအားထုတျမှုက စိတျလှုပျရှားဖှယျကောငျးတဲ့ရာထူးနရောတှေ၊ အခှငျ့အလမျးတှကေို ဖွဈစနေိုငျတယျဆိုတာကို ပွသထားပါတယျ။ Wynee က အငျဂငျြနီယာကြောငျးသားလူငယျလေးတဈယောကျကနေ ယခု အကွီးတနျးစီးပှားရေး အကွံပေးတဈယောကျဖွဈလာသူရဲ့ ဇာတျလမျးကို အောကျမှာ ဝမြှေပေးထားပါတယျ။
“ရနျကုနျ၊ မန်တ်တ်တလေးနဲ့ မွဈကွီးနားတို့ကို ခြိတျဆကျပွေးဆှဲတဲ့ ကညျြဆနျရထားတဈစငျးကို ကြှနျတျော တညျဆောကျခငျြပါတယျ။ ဒီရထားက ဂပြနျက ရထားလိုပဲ မွနျဆနျတဲ့ အရှိနျရှိပါလိမျ့မယျ”
၂၀၀၉ ခုနှဈက စကျရုပျပိုငျး၊ ကှနျပြုတာကိုအသုံးပွုပွီး စကျကိရိယာတှကေို ထိနျးခြုပျခွငျးပိုငျး (CNC)နဲ့ စကျယန်တရားတှကေို အလိုအလြောကျထိနျးခြုပျတဲ့စနဈပိုငျးတှအေပါအဝငျ အဆငျ့မွငျ့အငျဂငျြနီယာ ဘာသာရပျတှကေို အထူးပွုလလေ့ာထားတဲ့ မွနျမာဘှဲ့ရခါစ လူငယျလေးတဈဦးဟာ သူ့ရဲ့နောကျဖွဈလာမယျ့အနာဂတျပျေါမှာ စိတျလှုပျရှားနခေဲ့ပါတယျ။ ကံမကောငျးစှာနဲ့ သူ ဘှဲ့ရခြိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံက နိုငျငံရေးအခွအေနကေ စိနျချေါမှုတှရှေိနပွေီး စီးပှားရေးကဏ်ဍကလညျး အခွမေခိုငျဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဆိုငျကလုနျးနာဂဈက ရှာသူရှာသားတှကေနေ ဗိုလျခြုပျကွီးတှအေဆုံး ကြှနျတျောတို့အားလုံးကို ထိခိုကျစခေဲ့ပါတယျ။ မွနျမာ့နိုငျငံရေးပွောငျးလဲမှုက ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ရှဝေါရောငျတျောလှနျရေးနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှဈက ဖွဈခဲ့တဲ့ ဆိုငျကလုနျးနာဂဈမုနျတိုငျးကွောငျ့လို့ လူတျောတျောမြားမြားက ယုံကွညျကွပါတယျ။ ကုမ်ပဏီတှကေ လုပျငနျးတိုးခြဲ့ဖို့အစီအစဉျတှကေို ရပျဆိုငျးခဲ့ရသလို တခြို့က မငွိမျမသကျမှုတှကွေောငျ့ သူတို့လုပျငနျးကို ပိတျပဈခဲ့ကွပါတယျ။ ဇာတျလမျးထဲက လူငယျလေးကလညျး အလုပျပေါငျးမြားစှာကို လြှောကျခဲ့ပမေယျ့ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ အငျဂငျြနီယာ အလုပျတဈခုလေးတောငျ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါက အံ့သွစရာတော့မဟုတျပါ။
“မငျး ငှေ ခုနဈသနျးယူလာရငျ လယောဉျလကျမှတျ၊ ဗီဇာနဲ့ စငျကာပူမှာ အလုပျတဈခုရအောငျ ငါ စီစဉျပေးမယျ။ သုံး၊ လေးလကွာရငျ အရငျးကနြေိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက အငျဂငျြနီယာအားလုံးနီးပါး ဒီမှာရှိတယျ။” အလုပျအကိုငျရှာဖှရေေးအဂေငျြစီက ကြှနျတျောတို့ရဲ့လူငယျလေးကို စငျကာပူမှာ အလုပျလုပျဖို့ ဆှဲဆောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျက လူငယျတှကွေားမှာ စငျကာပူကိုပွောငျးရှပွေီ့း ကောငျးမှနျတဲ့အလုပျတဈခုရရှိဖို့က ရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။ အလားအလာတှရှေိပမေယျ့ နိုငျငံခဈြစိတျကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကနေ မထှကျခှာသှားခငျြဘူး။ ရငျးနှီးရမယျ့အခှငျ့အလမျးစရိတျက မွငျ့မားတာကွောငျ့လညျး ပါပါတယျ။
ဘှဲ့ရပွီးနောကျ သူက လမျးကွောငျးပွောငျးခဲ့ပါတယျ၊ သူ့ရဲ့အငျဂငျြနီယာဘှဲ့ကို ဘေးခြိတျထားလိုကျပွီး နာမညျကွီးပွညျတှငျးလုပျငနျးနဲ့ ဂပြနျလုပျငနျးတို့ပူးတှဲလုပျဆောငျနတေဲ့ အစိုးရမဟုတျသောအဖှဲ့အစညျး (NGO) တဈခုကနေ အလုပျကမျးလှမျးမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီ NGO က ပွနျလညျထူထောငျရေးဖွဈစဉျမှာ ဘေးအန်တရာယျထဲမှာ ကရြောကျခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒသေခံလူတှရေဲ့ အသိဉာဏျဗဟုသုတတှနေဲ့ လုပျနိုငျစှမျးတညျဆောကျရေးတှကေို အားကောငျးအောငျကူညီပေး ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လူငယျလေးဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိမွို့ကနေ မစှနျ့ခှာခဲ့တဲ့ မွို့သားလေးတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့အလုပျနရောအသဈမှာ နာဂဈသာမက ကာလရှညျကွာစှာဆငျးရဲမှဲတမှေုက ဖွဈပျေါစခေဲ့တဲ့ သကျရောကျမှုတှကေို ခံစားနကွေရတဲ့ ပွညျသူလူထုရဲ့ အခွအေနအေစဈအမှနျတှကေို သူ ကွုံတှခေဲ့ပါတယျ။
ဆငျးရဲမှဲတမှေုရဲ့အကွောငျးအရငျးခံ၊ မွို့ပွကိုရှပွေ့ောငျးမှုနဲ့ နီးစပျရာစကျရုံတှေ၊ အလုပျအကိုငျတှကေ လူနမှေုအရညျအသှေးကို ဘယျလောကျတိုးတကျစနေိုငျတယျဆိုတာတှကေို စဉျးစားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ရှုမွငျခကျြတှကေ ကယျြပွနျ့လာခဲ့ပါတယျ။ NGO ရဲ့ ပွညျတှငျးအကြိုးသကျရောကျမှုအပျေါကို သူ တနျဖိုးထားခဲ့ပွီး စီးပှားရေးတိုးတကျမှုကသာလြှငျ ဆငျးရဲမှဲတမှေုနဲ့ ယငျးရဲ့နောကျဆကျတှဲပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျတယျဆိုတာကို ယုံကွညျခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့လူငယျလေးရဲ့ အဲဒီအခြိနျက အလုပျအကိုငျလမျးကွောငျးနဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေ သူ့ အတနျးဖျောဟောငျးတှနေဲ့ အမြားကွီးကှာခွားခဲ့ပါတယျ။ သူ့အတနျးဖျောတှကေ စကျရုံမှာ၊ သို့မဟုတျ နိုငျငံခွားမှာ သူတို့ရဲ့ အငျဂငျြနီယာပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအခငျြးတှကေို တိုကျရိုကျအသုံးခပြွီး အလုပျလုပျနကွေပွီဖွဈပါတယျ။ သူက သူ့ရဲ့လမျးကွောငျးကို ပွောငျးလဲပွီး လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံရရှိဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။ Supply Chain Executive တဈယောကျအနနေဲ့ ပွညျတှငျးကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျဝငျခဲ့ပါ တယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ ကုနျသှယျရေး၊ Logistics ပိုငျးနဲ့ ကုနျစညျထိနျးခြုပျခွငျးဆိုငျရာ ကယျြပွနျ့တဲ့စီးပှားရေး လုပျငနျးစဉျတှကေို လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေနေ လူငယျလေးက သငျယူခဲ့ပါတယျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးသဘာဝ၊ အထူးသဖွငျ့ အစီအစဉျဆှဲခွငျး၊ ဝယျယူရေးပိုငျး၊ Sourcing ပိုငျး၊ ကုနျကစြရိတျဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ မဟာဗြူဟာဖျောဆောငျမှုစတဲ့ လုပျငနျးလညျပတျမှုဆိုငျရာတှကေို နားလညျဖို့က အငျဂငျြနီယာတဈယောကျအတှကျ မလှယျကူခဲ့ပါဘူး။ နှဈအနညျးငယျကွာပွီးနောကျ လုပျငနျးပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဗဟုသုတကို အတျောအသငျ့ရရှိခဲ့ကွောငျး၊ ဒါပမေဲ့ ပညာရပျပိုငျးဆိုငျရာ သီအိုရီနဲ့ သူ့ရဲ့စှမျးရညျကို တိုးတကျအောငျလုပျဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာကို သူ နားလညျခဲ့ပါတယျ။ MBA ဘှဲ့ကို နိုငျငံခွားမှာ တကျရောကျဖို့ သူဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
သူ့သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ကို လှောငျရယျခဲ့ပွီး “သာမနျမိသားစုကလာတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျက နိုငျငံခွားမှာ MBA တကျရောကျလလေ့ာခငျြတာက ဘယျလိုလုပျဖွဈနိုငျမှာလဲ” ဆိုပွီး ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ MBA ကြောငျးသားတှကေို သာမနျအားဖွငျ့ ပညာသငျဆုတှမေပေးပါဘူး။ သူ့မိသားစုကလညျး သူ့ကို ထောကျပံ့ဖို့ မတတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူ ပညာသငျဆုအပွညျ့အဝရခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ MBA ခရီးစဉျအတှငျးမှာ ပညာရပျပိုငျးဆိုငျရာ ခဉျြးကပျမှုတှေ၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှနေဲ့ နိုငျငံတကာစီးပှားရေးလကျတှေ့ ကငျြ့သုံးမှုတှအေပျေါ နားလညျမှုတှကေို စုဆောငျးခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးသငျရိုးအပွငျ တက်ကသိုလျကြောငျးသားသမဂ်ဂရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျရငျး နိုငျငံရေးပိုငျး၊ ခေါငျးဆောငျမှုပိုငျးနဲ့ စီစဉျမှုပိုငျးဆိုငျရာစှမျးရညျတှကေိုလညျး တိုးတကျစခေဲ့ပါတယျ။
လစာကောငျးတဲ့ ထိုငျးကုမ်ပဏီကွီးတဈခုမှာ အလုပျလုပျဖို့ သူ ခဉျြးကပျခံခဲ့ရပွီးတော့ နိုငျငံတကာလုပျငနျးကငျြ့သုံးမှုတှကေို လကျတှသေ့ငျယူဖို့ အခှငျ့အလမျးကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ လစာမွငျ့မွငျ့မားမားနဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးမှာ အလုပျလုပျနရေတဲ့ဝနျးကငျြကို သူသဘောကပြမေယျ့ မိခငျနိုငျငံကို ပွနျလာပွီး စီးပှားရေးတိုးတကျမှုအတှကျ အလုပျလုပျပေးခငျြခဲ့ပါတယျ။ လအနညျးငယျကွာပွီးနောကျ သူ့ရဲ့အထကျလူကွီးဆီ အလုပျထှကျစာကို အီးမေးလျပို့ခဲ့ပါတယျ။ “ဘာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျခငျြရတာလဲ။ မငျးရဲ့နိုငျငံထကျ ပိုသာတဲ့ ဒီမှာပဲ အလုပျလုပျပွီး အခွခေပြါ။”လို့ သူ့အထကျလူကွီးက ပွောခဲ့ပါတယျ။ “ဒီမှာ ဇိမျရှိတဲ့ဘဝကို နထေိုငျခံစားရတိုငျး ငါ နတေို့ငျး အပွဈရှိသလိုခံစားရတယျ။ ငါ့နိုငျငံအတှကျ အလုပျလုပျပေးခငျြတယျ။ ဒါကွောငျ့ ငါ့ကို ထှကျခှငျ့ပေးပါ”လို့ သူက ပွုံးပွီး ပွနျဖွခေဲ့ပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လူငယျလေးဟာ စီးပှားရေး၊ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးနဲ့ လုပျငနျးရေးရာတှကေို အထောကျအပံ့ပေးရငျး ရနျကုနျမွို့ရှိ နိုငျငံခွားအစိုးရရုံးမှာ အလုပျလုပျကိုငျလကျြရှိပါတယျ။ “စီးပှားရေးကို အခွခေံတဲ့ တိုငျးပွညျတိုးတကျမှုမှာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ယုံကွညျခကျြက အရငျကထကျ ပိုပွီးရှငျးလငျးလာပါတယျ။ လမျး၊တံတားစတဲ့အခွခေံအဆောကျအဦးနဲ့ လူ့အရငျးအနှီး၊ ငှရေေးကွေးရေးစနဈစတဲ့အခွခေံအဆောကျအဦးတှရေဲ့ အရေးကွီးပုံကို သိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စီးပှား ရေးတိုးတကျမှုမရှိဘဲ အမြားကွီးမလုပျနိုငျပါဘူး။”သူ့ရဲ့ အငျဂငျြနီယာဘှဲ့ကို အလဟသဿဖွဈစတေယျလို့ မငျး ထငျသလား။ “လုပျငနျးကို အငျဂငျြနီယာပိုငျးရှုထောငျ့ကနေ ကွညျ့ပွီး MBA ရှုထောငျ့ကနေ ယငျးရဲ့အကြိုးဖွဈထှနျးမှုကို တှကျခကျြတဲ့အခါ ငါ့အတှကျ ပိုမိုလှယျကူစပေါတယျ။ ဒါက အကြိုးကြေးဇူးပါပဲ။”
၂၀၀၉ ခုနှဈကို နောကျပွနျကွညျ့ရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့လူငယျလေးက သူလြှောကျခဲ့တဲ့အလုပျအကိုငျ လမျးကွောငျးကို ကွိုမမွငျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ ပျေါပေါကျလာတဲ့အခှငျ့အလမျးတှကေ ပုံဖျောခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေ ယနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ရှုမွငျခကျြတှကေို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ စိနျချေါမှုတှေ၊ အတားအဆီးတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားက သူ့ကို အဆကျမပွတျတိုးတကျမှုလမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျစခေဲ့ပွီး သူ့ပတျဝနျးကငျြက လူ့အသိုကျအဝနျးအတှကျ အထောကျအကူပေးနိုငျဖို့ နညျးလမျးကောငျးတှနေဲ့ အခှငျ့အလမျးတှဖွေဈစခေဲ့ပါတယျ။
အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲခြင်း (အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်မှ လူ့အကျိုးပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့)
အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းက ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး တစ်သမတ်တည်းက ဖြစ်ခဲပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကို လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေက ပုံဖော်ပေးသလို လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကလည်း ပုံဖော်ပေးပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါဇာတ်လမ်းမှာ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက ဘယ်လိုမျိုး အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းကို ဖြစ်ထွန်းလာစေတယ်ဆိုတာကို ပြသထားပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ဒါက အတားအဆီးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်အလမ်းတွေကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ရေးပေါ်မှာ အာရုံစိုက်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ရာထူးနေရာတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသထားပါတယ်။ Wynee က အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားလူငယ်လေးတစ်ယောက်ကနေ ယခု အကြီးတန်းစီးပွားရေး အကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာသူရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အောက်မှာ ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
“ရန်ကုန်၊ မန္တ္တ္တလေးနဲ့ မြစ်ကြီးနားတို့ကို ချိတ်ဆက်ပြေးဆွဲတဲ့ ကျည်ဆန်ရထားတစ်စင်းကို ကျွန်တော် တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်။ ဒီရထားက ဂျပန်က ရထားလိုပဲ မြန်ဆန်တဲ့ အရှိန်ရှိပါလိမ့်မယ်”
၂၀၀၉ ခုနှစ်က စက်ရုပ်ပိုင်း၊ ကွန်ပျုတာကိုအသုံးပြုပြီး စက်ကိရိယာတွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းပိုင်း (CNC)နဲ့ စက်ယန္တရားတွေကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ပိုင်းတွေအပါအ၀င် အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်တွေကို အထူးပြုလေ့လာထားတဲ့ မြန်မာဘွဲ့ရခါစ လူငယ်လေးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ပေါ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ သူ ဘွဲ့ရချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအခြေအနေက စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍကလည်း အခြေမခိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်က ရွာသူရွာသားတွေကနေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအဆုံး ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုက ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်လို့ လူတော်တော်များများက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသလို တချို့က မငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့် သူတို့လုပ်ငန်းကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲက လူငယ်လေးကလည်း အလုပ်ပေါင်းများစွာကို လျှောက်ခဲ့ပေမယ့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်တစ်ခုလေးတောင် မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါက အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ။
“မင်း ငွေ ခုနစ်သန်းယူလာရင် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဗီဇာနဲ့ စင်ကာပူမှာ အလုပ်တစ်ခုရအောင် ငါ စီစဉ်ပေးမယ်။ သုံး၊ လေးလကြာရင် အရင်းကျေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အင်ဂျင်နီယာအားလုံးနီးပါး ဒီမှာရှိတယ်။” အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီက ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးကို စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က လူငယ်တွေကြားမှာ စင်ကာပူကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရရှိဖို့က ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ အလားအလာတွေရှိပေမယ့် နိုင်ငံချစ်စိတ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ မထွက်ခွာသွားချင်ဘူး။ ရင်းနှီးရမယ့်အခွင့်အလမ်းစရိတ်က မြင့်မားတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက် သူက လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ဘေးချိတ်ထားလိုက်ပြီး နာမည်ကြီးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းနဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းတို့ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (NGO) တစ်ခုကနေ အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ NGO က ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ထဲမှာ ကျရောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံလူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတတွေနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတည်ဆောက်ရေးတွေကို အားကောင်းအောင်ကူညီပေး ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူငယ်လေးဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ကနေ မစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ မြို့သားလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလုပ်နေရာအသစ်မှာ နာဂစ်သာမက ကာလရှည်ကြာစွာဆင်းရဲမွဲတေမှုက ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ခံစားနေကြရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေအနေအစစ်အမှန်တွေကို သူ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုရဲ့အကြောင်းအရင်းခံ၊ မြို့ပြကိုရွှေ့ပြောင်းမှုနဲ့ နီးစပ်ရာစက်ရုံတွေ၊ အလုပ်အကိုင်တွေက လူနေမှုအရည်အသွေးကို ဘယ်လောက်တိုးတက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရှုမြင်ချက်တွေက ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ NGO ရဲ့ ပြည်တွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ကို သူ တန်ဖိုးထားခဲ့ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကသာလျှင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ယင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးရဲ့ အဲဒီအချိန်က အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေက သူ့ အတန်းဖော်ဟောင်းတွေနဲ့ အများကြီးကွာခြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့အတန်းဖော်တွေက စက်ရုံမှာ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှာ သူတို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်အသုံးချပြီး အလုပ်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူက သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ Supply Chain Executive တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါ တယ်။ အဓိကအားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ Logistics ပိုင်းနဲ့ ကုန်စည်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကနေ လူငယ်လေးက သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘာဝ၊ အထူးသဖြင့် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ ၀ယ်ယူရေးပိုင်း၊ Sourcing ပိုင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုစတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတွေကို နားလည်ဖို့က အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အတွက် မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတကို အတော်အသင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီနဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သူ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ MBA ဘွဲ့ကို နိုင်ငံခြားမှာ တက်ရောက်ဖို့ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို လှောင်ရယ်ခဲ့ပြီး “သာမန်မိသားစုကလာတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားမှာ MBA တက်ရောက်လေ့လာချင်တာက ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ” ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ MBA ကျောင်းသားတွေကို သာမန်အားဖြင့် ပညာသင်ဆုတွေမပေးပါဘူး။ သူ့မိသားစုကလည်း သူ့ကို ထောက်ပံ့ဖို့ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ ပညာသင်ဆုအပြည့်အ၀ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ MBA ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုတွေ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလက်တွေ့ ကျင့်သုံးမှုတွေအပေါ် နားလည်မှုတွေကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသင်ရိုးအပြင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း နိုင်ငံရေးပိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ စီစဉ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုလည်း တိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။
လစာကောင်းတဲ့ ထိုင်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သူ ချဉ်းကပ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းကျင့်သုံးမှုတွေကို လက်တွေ့သင်ယူဖို့ အခွင့်အလမ်းကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လစာမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ဝန်းကျင်ကို သူသဘောကျပေမယ့် မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်လာပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်ခဲ့ပါတယ်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးဆီ အလုပ်ထွက်စာကို အီးမေးလ်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ “ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ချင်ရတာလဲ။ မင်းရဲ့နိုင်ငံထက် ပိုသာတဲ့ ဒီမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး အခြေချပါ။”လို့ သူ့အထက်လူကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ဒီမှာ ဇိမ်ရှိတဲ့ဘ၀ကို နေထိုင်ခံစားရတိုင်း ငါ နေ့တိုင်း အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်။ ငါ့နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါ့ကို ထွက်ခွင့်ပေးပါ”လို့ သူက ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူငယ်လေးဟာ စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ လုပ်ငန်းရေးရာတွေကို အထောက်အပံ့ပေးရင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားအစိုးရရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ “စီးပွားရေးကို အခြေခံတဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်က အရင်ကထက် ပိုပြီးရှင်းလင်းလာပါတယ်။ လမ်း၊တံတားစတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့ လူ့အရင်းအနှီး၊ ငွေရေးကြေးရေးစနစ်စတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးတွေရဲ့ အရေးကြီးပုံကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုမရှိဘဲ အများကြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူး။”သူ့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို အလဟဿ ဖြစ်စေတယ်လို့ မင်းထင်သလား။ “လုပ်ငန်းကို အင်ဂျင်နီယာပိုင်းရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ပြီး MBA ရှုထောင့်ကနေ ယင်းရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို တွက်ချက်တဲ့အခါ ငါ့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒါက အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။”
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကို နောက်ပြန်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးက သူလျှောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်အကိုင် လမ်းကြောင်းကို ကြိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေက ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေက ယနေ့မှာ သူ့ရဲ့ရှုမြင်ချက်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အတားအဆီးတွေရှိခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားက သူ့ကို အဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်စေခဲ့ပြီး သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူ့အသိုက်အ၀န်းအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
A career path can take many forms, and rarely is it linear. A career is shaped not only by one’s own ambitions and dreams, but also by one’s surroundings and the opportunity sets available. The story below shows how the economy, politics, and even our own changing views of the world can causeacareer path to evolve. Sometimes this brings setbacks, other times, opportunities, but as the story below shows,amindset focused on self-improvement and how one can best contribute can lead to exciting roles and opportunities. Wynee shares the story below ofayoung engineering student, nowasenior economic advisor:
“I want to buildamagnetic levitation train linked to Yangon, Mandalay and Myitkyina. It will be high speed train as Japanese” In 2009, A fresh Maynamar graduate, specialized in advanced engineering including robotics, CNC and automation, was excited about his upcoming future.
Unfortunately, the time he graduated presentedachallenging political situation and fragility in every business sector in Myanmar. Cyclone Nargis wounded us all, from villagers to senior generals. Many people believe that Myanmar political change resulted fromasaffron revolution in 2007 and Cyclone Nargis in 2008. Companies suspended their business plans for expansion and some even closed down due to expected chaos. Our young candidate did not getasingle technical engineering job, though he applied to many, and this is no surprise.
“If you bring7million MMK, I will arrange air ticket, visa and job at Singapore. It can be breakeven after3to4months later. Almost all Myanmar engineers are here” An employment agency persuaded our young candidate to work in Singapore. At that time, Singapore was very popular among young talent to migrate there and getadecent job. Despite the prospect, he would not leave the country because of his patriotism and of course high opportunity cost.
After graduation, he changed gears, put his engineering degree aside, and got an offer from an NGO which was jointly operated betweenafamous local organization and Japanese one. The NGO strengthened the knowledge of local people on disasters and capacity building in the recovery process. Our young candidate was an urban guy who never left his native town. In his new role, he experienced the real situation of local people suffering the impacts which were not only created by Nargis but also from long-standing poverty. He started to consider the root cause of the poverty, urban migration and how nearby factories and employment could improve quality of living. His perspective changed from micro to macro. While he valued the NGO’s local impact, he started to believe that only economic development could to tackle poverty and its complications.
Our candidate’s path and ambitions at this point in his career was vastly different from that of his former classmates. His classmates already worked in factories or abroad, directly apply their engineering skills. He decided to change his path and gain business experience, and joinedalocal company as an executive managing the supply chain. He learned broad business processes especially trading, logistics and stock control from his fellow colleagues. It was not easy for engineer to understand business nature especially operation such as planning, purchasing, sourcing, cost structure and strategy formulation. After couple of years, he realized that he got certain level of knowledge about business but needed to bolster his skills with academic theory. He decided to study MBA abroad.
His friends laughed at him and said “how could it be possible asaguy from average family wants to study abroad specializing in MBA”. MBA students are not ordinarily offered scholarships, and his family couldn’t afford to support him. However, he gotafull scholarship, and during his MBA journey, he gathered academic approaches,astrong network and an understanding of international practices. Apart from curriculum, he developed political, leadership and organizational skills by serving as president of the university student union.
He was approached to work at one of the Thai conglomerates with decent pay and had the opportunity to learn international business practices first hand. While he enjoyed the environment, working at big company with high pay but he sought to return to the homeland and work for economic development. Few months later, he sent an email to his boss about his resignation. “Why do you want to go back to Myanmar? Just work and settle here which is much better than your country” his boss said. “I feel guilty everyday whenever I experience luxury life in here. I owe it to my country to work so please let me go.” he smiled in reply.
Now our candidate works inaforeign government office in Yangon, supporting economic, commercial and business activities. “My belief in economic based regional development is more clear than ever. You can see the importance of hard and soft infrastructure but you can’t do very much without economic development”. Do you think he waste his engineering degree? “It is much easier when I look at business firm from engineering perspective and evaluate its prosperity from MBA view. It is quite advantageous”
Back in 2009, our candidate could never have predicted the path that his career took, but his experiences, moulded by both his ambitions and opportunity set, have imbued in himadiversity of viewpoints that enrich his perspective today. Despite challenges and setbacks, his mindset set him onapath of continuous improvement that led to improving opportunities and better ways for him to contribute to the community around him.